မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပန်းချီးကားချပ် အရာများ – ADS Myanmar Blog
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပန်းချီးကားချပ် အရာများ
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရဲ့ပြတင်းပေါက်မှန်ချပ်အသစ်တွေကို မတပ်ခင် ၊ အချိန်မကုန်အောင် ဆေးကြိုတင်သုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးသုတ်နေရင်း ကျွန်တော် ပြတင်းပေါက်မှန်ချပ်တွေကို အခြောက်လှန်းထားဖို့နေရာ မရှိတော့တဲ့အတွက် ၊ အပြင်မှာ နေအလင်းရောင်နဲ့ မြန်မြန်ခြောက်အောင်လုပ်ဖို့အကြံရလာပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြတင်းပေါက်မှန်ချပ်တွေကိုယူလာပြီး ၊ အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ချထားလိုက်ပါတယ်။ ခဏအကြာမှာ ကျွန်တော် ပြတင်းပေါက်မှန်ချပ်တွေကို မ ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ မြင်တွေ့လိုက်ရတာကတော့………………. နေရောင်နဲ့ အပူချိန်တွေကြောင့် ကျွန်တော့် မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံစံ အကွက် ၁၉ ကွက် ထင်ကျန်နေခဲ့တာပါပဲ။
Author ADS BLOGPosted on September 24, 2015 September 30, 2015 Categories OtherTags မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပန်းချီးကားချပ် အရာများ
Previous Previous post: ဒုတိယအကြိမ်မြောက် BarCamp Toungoo 2015 ကို စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပမည်
Next Next post: မြက်ခင်း အရိတ်ကောင်းပေမယ့် …. ကံမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့